पत्रपत्रिकामा प्रदेश : रंगेली अस्पतालमा प्रसूती सेवा बन्द
विराटनगर ८ असोज । मोरङको रंगेली नगरपालिकामा रहेको रंगेली अस्पतालमा प्रसुती सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालकी प्रसूती रोग विशेषज्ञ डा. प्रियंका मिश्राले राजीनामा दिएपछि प्रसूती सेवा बन्द भएको हप्ता दिन बितिसकेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि सर्वसाधारणहरुलाई मर्का परेको छ । नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती र प्रसूतीकालागि अब नीजि अस्पतालमा महँगोमा उपचार गर्न बाध्य हुनु परेको हो । अहिलेपनि नियमित चेकजाँचकोलागि दैनिक अस्पतलमा गर्भवतीहरु पुग्दै फर्किदै गरेका छन् । ८ देखि १० जना महिलाहरु नियमित चेकजाँचकोलागि पुग्ने गरेका छन् ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको अस्पतालमा प्रसूती सेवा बन्द भएपछि पछाडी पारिएको क्षेत्र तथा विपन्नहरुलाई समस्या भएको छ । करारमा नियुक्ति गरिएकी डा. प्रियंका मिश्राले राजीनामा दिएपछि २०७५ जेठदेखि शुरु भएको सेवा बन्द भएको हो । अस्पतालमा अहिले प्रसूती सेवा बन्द भएपछि उपकरणहरुमा समेत माकुराको जालो लागेको समाचार ब्लाष्ट टाइम्समा छ ।
झापाको हल्दीबारी गाँउपालिकाको हरेक वडामा एक एक वटा स्मार्ट बालविकास कक्षा शुरु गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको खबरमा कक्षा कोठामा २ बटा एसी, इन्टरनेट, ल्यापट, व्हाइट वोर्ड, रंगीन भित्ते लेखन, प्रोजेक्टर लगायतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यस्तै कक्षा कोठामा नै खेल समाग्री समेत राखिएको छ । सामुदायिक बालविकास कक्षालाई नै स्मार्ट बनाएपछि विद्यार्थीहरु नियमति आउने गरेको लक्ष्मी माविकी बालविकास शिक्षिका प्रमिला राजवंशीले बताइन् । गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले गाउँपालिकामा रहेका १७ विद्यालय मध्ये प्रत्येक वडामा १ वटा लाई स्मार्ट बाल विकास कक्षा बनाएको बताए ।
नागरिक पूर्वेलीमा मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत गाईघाट बेल्टार सडक खण्ड धमाधम काम हुन थालेको समाचार छ । राष्ट्रिय गौरवको अयोजनाका रुपमा रहेको लोकमार्गको यो खण्डमा दशैँ अघि नै कालोपत्रेको काम पुरा हने लोकमार्ग अयोजनाको कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ । आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर ललिजन खनालले २१ किलोमिटर सडक दशैँ अघि नै कालोपत्रे गर्ने बताए ।
उर्लाबारी नगरपालिकामा विवाद उत्कर्षमा, अधिकृतले छोडे नगरपालिका शिर्षकमा समाचार छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले आफू असुरक्षित भएको भन्दै नगरपालिका छोडे्का हुन् ।
उद्घोष दैनिकमा लालपूर्जाधारी विस्थापित शिर्षकमा समाचार छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरेको जग्गा बापत उपलब्ध गराएको सट्टाभर्नाको जग्गाको लालपुर्जा पाएकाहरुले ३५ वर्ष वित्दापनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले सट्टा भर्नामा मोरङको तत्कालिन वयरवन गाविस ९ हालको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा रहेको जग्गाको धनीपुर्जा दिएपछि उपभोग भने अरुले नै गर्दै आएका छन् ।
हकभोगकोलागि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका उनीहरुले सर्वाेच्चले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेपनि उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । पथरीशनिश्चरे ७ मा ६० बिघा जग्गा सट्टाभर्नामा दिएपनि लालपुर्जा मात्रै बोक्नु परेको तेजप्रसाद अधिकारीले बताए ।